အခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲ မပြည့်စုံတဲ့လက်နက် | Frontier Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူဦးရေ တစ်စတစ်စဖြင့်မြင့်တက်လာချိန်တွင် လူအများအပြားကူးစက်ခံရပါက အများပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်တုံ့ပြန်မည်နှင့်ပတ်သက်၍ အဖြေထက် အမေးက ပိုမိုများပြားနေခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ(PPE) နဲ့ အသက်ရှူစက်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မယ်ဆိုပါက အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ လုံလောက်ပါ့မလား။”
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးသည် Frontier က ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည့် အဆိုပါမေးခွန်းကို သဘောကျခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
မေးသည့် မေးခွန်းကို ဖြေမည့်အစား ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ကြီးက “အသက်ရှူစက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့ထင်လဲ၊ လုံလောက်ပြီဆိုတာကို ဘာနဲ့တိုင်းတာမှာလဲ” ဆိုသည့် မေးခွန်းဖြင့်သာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
“COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ တစ်ရာမှာ ခြောက်ဦးလောက်ပဲ အသက်ရှူစက်လိုတာ” ဟု သူက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများအနက် မဆိုစလောက်သော ပမာဏသည်သာ ဆက်လက်အသက်ရှင်ရေးအတွက် အသက်ရှူစက်လိုကြောင်း နိုင်ငံရပ်ခြားရှိဖြစ်ရပ်များက ဒေါ်ခင်ခင်ကြီးပြောဆိုမှုမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ဆရာဝန်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ အဆမတန်များပြားလာခြင်းအတွက် အသင့်ပြင်ထားခြင်းရှိမရှိ၊ ယင်းများပြားလာသည့် ကူးစက်ခံရသူများကို ကုသပေးရာတွင် ဝတ်စုံများနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များရှိနေခြင်းရှိမရှိ အစရှိသည့် မေးခွန်းများလည်းရှိနေပြန်သည်။
အသက်ရှူစက်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရအရာရှိများက Frontier ကို ကောင်းစွာဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိသော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆေးဝါးနှင့် ခရီးသွားလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ International SOS ကမူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက်ရှူစက် ၂၀၀ လောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၉၈၃၂ ဦး သို့မဟုတ် လူ ၁၀၀၀၀ လျှင် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန် ၆ ဒသမ ၁ ဦးသာရှိနေကြောင်း မတ် ၂၄ ရက်တွင် ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မြေပြင်အခြေအနေကိုကြည့်လျှင် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ သာမန်လောက်ကိုပင် ကုသပေးရန်အတွက် ရန်ကုန်ရှိ ဆေးရုံများတွင် အသက်ရှူစက်နှင့် သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ဆောင်များတွင် အထူးကြပ်မတ်ကုသရေးကုတင်လုံလောက်စွာမရှိဘဲ ဆေးရုံများသည်လည်း ဝန်နှင့်အားမမျှသလောက်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်ကို Frontier က လေ့လာသိရှိခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုတားဆီးရေးတွင် ကူးစက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသူများကို သီးခြားထားရှိ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဟိုတယ်များ၏အကူအညီကြောင့် သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်စရာနေရာများလည်း တိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ကုသရေးဆိုင်ရာကိရိယာများ ပြတ်လပ်မည်ဆိုပါက သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်သူများကို ထားရှိသည့် အဆောက်အအုံများသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက် အသက်ရှင်သန်ရန်အသည်းအသန်ကြိုးပမ်းသူများအား ကူညီနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ၏ မတ် ၃၁ ရက်မိန့်ခွန်းတွင် မပြည့်စုံသည့်ကြားက စိတ်ဓာတ်မြင့်မားစွာဖြင့် ရှေ့တန်းကတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် ဆရာဝန်၊သူနာပြုနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
A quarantine room at the South Okkalapa Maternal and Child Hospital in Yangon. Seventeen people were under quarantine when Frontier visited on March 26. (Hkun Lat | Frontier)
မြန်မာ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုတားဆီးရေးအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိနေပြီး စောင့်ကြည့်ခံနေရသူ(PUI) များနှင့် သက်ဆိုင်နေသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် အစိုးရဆေးရုံတစ်ရုံရှိ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ဆောင်တွင် ၁၄ ရက်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းစောင့်ကြည့်ခံရသူများထံမှ သွေးသားနမူနာများကို ရယူကာ ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေသည်။ ယင်းဓာတ်ခွဲခန်းသည် မြန်မာတွင် COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာဖြစ်သည်။ ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသူများကို ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သလို အခြားဆေးရုံတစ်ရုံရှိ သီးသန့်ဆောင်တွင်ထားရှိကာ ကုသမှုများလည်း ပြုလုပ်ပေးနေသည်။ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် အခြား PUI များကိုမူ ခံစားနေရသည့် ရောဂါဝေဒနာများပျောက်ကင်းစေရေးအတွက် ပုံမှန်အဆောင်သု့ိ ပြောင်းရွှေ့ကာ ကုသပေးနေသည်။
မတ် ၂၉ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် PUI ၄၇၄ ဦးရှိနေပြီး ၎င်းတို့အနက် ၁၀ ဦးသည် COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိကာ ၆၃ ဦးသည် စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်သည်။( နောက်ထပ် PUI လေးဦး COVID-19 ကူစက်ခံထားရကြောင်း မတ် ၃၀ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် ရလဒ်ထွက်ခဲ့သည်။)
အခြားကာကွယ်ရေးနည်းတစ်ခုမှာ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ပမှ ရောက်ရှိလာသူများ၊ သံသယရှိသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူများအား ဆေးရုံတစ်ရုံ၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံတစ်ခုနှင့် နေအိမ်မှာပင် ၁၄ ရက်နေထိုင်ကာ စောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်နေသည်။ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ခံနေရချိန်အတွင်း COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာပြသူရှိလာပါ ၎င်းကို ဆေးရုံတစ်ရုံရှိ သီးခြားဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိများကပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ပထမဆုံးလူနာမရှိမီ မတ်လ ဒုတိယအပတ်ကတည်းက သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံများကို ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးကပြောဆိုခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊ ဧရာဝတီဘဏ်သင်တန်းကျောင်းများ၊ လက်ဝှေ့ခန်းမများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အဆောက်အအုံများအား သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ရေးနေရာများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် ဟိုတယ်ခန်းများကို အသုံးပြုရန် အစိုးရအရာရှိများသည် မြန်မာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။
ကူးစက်ခံရသူဦးရေများပြားလာပါက သီးခြားစောင့်ကြည့်နေရာများအဖြစ် အသုံးပြုရန် အဆောက်အအုံရာပေါင်းများစွာကို ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ အစီအစဉ်ကြီးများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘော်စတန်တွင် ဆေးပညာလေ့လာသင်ယူခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးပညာရှင်ဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးကို အကြံပေးနေသည့် ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းကပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ရှိနေရာများစွာတွင် လူ ၃၀၀၀၀ ခန့်ကို သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်နိုင်မည့်နေရာများ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရှိ အမည်မဖော်လိုသူအရာရှိတစ်ဦးကပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင်းနေရာများသည် သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ရန်သာဖြစ်ပြီး ကုသပေးမည့်နေရာများမဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကပြောဆိုခဲ့သည်။
Boots and rubber slippers sit on the floor ofapersonal protective equipment (PPE) changing room at the South Okkalapa Maternal and Child Hospital in Yangon on March 26. (Hkun Lat | Frontier)
သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်မည့်နေရာလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေကြောင်း အာဏာပိုင်များကပြောဆိုနေသော်လည်း ပိုမိုများပြားလာမည့် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူများကို ကုသပေးရန် အစိုးရဆေးရုံများရှိ သီးခြားဆောင်များကို တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံဖြစ်သလို ဆေးကျောင်းသားများအတွက် သင်ကြားရေးဆေးရုံလည်းဖြစ်သည့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဆေးရုံကြီး၌ လူနာလေးဦးထားရှိနိုင်သည့် သီးခြားဆောင်တစ်ဆောင်နှင့် အသက်ရှူစက်လေးခုရှိနေသည်။ ဆေးရုံရှိ သီးခြားဆောင်တွင် PUI နှစ်ဦးကို လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။
လူနာ ၃၀ မှ ၄၀ ဦးကြားထားရှိနိုင်ရန် သီးခြားဆောင်ကို ချဲ့ထွင်၍ရနိုင်သော်လည်း အသက်ရှူစက်ကဲ့သို့ ကိရိယာများကို လိုအပ်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကြည်စိုးကပြောဆိုခဲ့သည်။ ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် တိကျသော အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍မူ ဒေါက်တာကြည်စိုးက ဆက်လက်ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ချေ။
လူနာများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေပြီဖြစ်သည့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးနားတွင် ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရှိနေပြီး သင်ကြားရေးဆေးရုံဖြစ်သောကြောင့် ကုသရေးဆိုင်ရာကိရိယာ အတော်လေးစုံစုံလင်လင်ရှိနေသည်။ ဆေးရုံ၌ အသက်ရှူစက် ၁၅ ခုရှိနေပြီး အဆောင်တစ်ခုချင်းစီ သီးခြားအသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကာ အဆောင်အချင်းချင်းကြားပေးပို့အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။
“ဆေးရုံမှာ အခြားအသက်ရှူစက်တွေရှိနေပေမယ့် ငှားပြီးသုံးလို့မရဘူး၊ COVID-19 လူနာတစ်ဦးသုံးထားတဲ့ အသက်ရှူစက်ကိုလည်း အခြားလူနာတစ်ဦးကို ပေးသုံးလို့မရဘူး” ဟု သီးခြားဆောင်တွင်တာဝန်ကျသည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ရှိ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး အင်းစိန်ဆေးရုံတက်ရောက်နေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်း မတ် ၂၄ ရက်တွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းကို ဝေဘာဂီဆေးရုံ၌ ကုသမှုခံယူရန် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံဖြစ်သည့် အင်းစိန်ဆေးရုံကြီး၌ သီးခြားဆောင်ရှိ အသက်ရှူစက်တစ်ခုအပါအဝင် အသက်ရှူစက်သုံးခုရှိနေကာ PPE ဝတ်စုံလည်း ၄၃၉ ခုရှိနေသည်။ ဆေးရုံသည် PUI ရှစ်ဦးကို လက်ခံနိုင်ပြီး မတ် ၂၆ ရက်တွင် ခုနစ်ဦးကို လက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။ အခြားဆေးရုံများမှရောက်လာသည့် လူနာဦးရေတိုးလာမည်ဆိုပါက မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်မည်နှင့်ပတ်သက်၍ Frontier က မေးမြန်းခဲ့ရာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ မေဆန်းချိုက ဖြေဆိုခြင်းမပြုခဲ့ချေ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ အင်းစိန်ဆေးရုံကြီးသည် အခြားအစိုးရဆေးရုံများထက် COVID-19 လူနာဦးရေကို ပိုမိုများပြားစွာလက်ခံကုသပေးနိုင်ခြေရှိနေသည်။ တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန်ထမ်းဆောင်မည့် ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများလည်းရှိနေသည်။ လူနာများများပြားပြားရှိမလာသေးသည့်အတွက် ကံကောင်းသည်ဟုပင် ဆိုနိုင်ကြောင်း ဆေးရုံရှိ သူနာပြုတစ်ဦးက ကုသရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာအကန့်အသတ်နှင့်ရှိနေသည်ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မကြာသေးမီတွင် ပြည်ပမှပြန်လာပြီး ဆေးရုံ၌ သီးခြားစောင့်ကြည့်ခံနေရသူအများစုကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မိခင်နှင့် ကလေးဆေးရုံတွင် ထားရှိခဲ့သည်။ မတ် ၂၃ ရက်တွင် ဆေးရုံ၌ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ခံရသူ ၅၆ ဦးရှိခဲ့သော်လည်း Frontier က ဆေးရုံသို့သွားရောက်ခဲ့သည့် မတ် ၂၆ ရက်တွင်မူ စောင့်ကြည့်ခံရသူ ၁၇ ဦးသာရှိတော့သည်။ ကျန်လူနာများသည် ဟိုတယ်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းကာ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ခံကာလကို ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
မိခင်နှင့်ကလေးဆေးရုံရှိ သီးခြားထားရှိစောင့်ကြည့်ခံလူနာများနေထိုင်ရသည့် လေးထပ်အဆောက်အအုံတွင် ဝိုင်ဖိုင်နှင့် အစားအစာအခမဲ့ထောက်ပံ့ထားသည်။ သု့ိသော် ဆေးရုံသည် သီးခြားစောင့်ကြည့်ဆောင်အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသလို အသက်ရှူစက်လည်းရှိမနေခဲ့ချေ။ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမော်ဦးက နောက်ထပ် သီးခြားစောင့်ကြည့်ခံရသူများကိုလက်ခံရန် ခပ်မြန်မြန်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သော်လည်း မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်သည်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ချေ။
A visitor to Insein General Hospital sanitises his hands before entering the building on March 26. (Thuya Zaw | Frontier)
အခြားမြို့များ၊ မြို့နယ်များရှိ PUI များထားရှိသည့် ဆေးရုံများတွင် သီးခြားစောင့်ကြည့်ဆောင်များအတွက် နေရာလုံလောက်လောက်မရှိသလို COVID-19 အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပါကလည်း ကိုင်တွယ်ရန် အသက်ရှူစက်လုံလုံလောက်လောက်မရှိချေ။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ပုသိမ်ဆေးရုံ၌ PPE ဝတ်စုံ ၂၂၀ ၊ လူနာခြောက်ဦးအတွက် သီးခြားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဆောင်တစ်ဆောင်နှင့် အသက်ရှူစက်သုံးခုရှိနေသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် နိုင်ငံတွင်း လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးဒေသများတွင်ပါဝင်ပြီး အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများစွာ ပြန်လာသည့် ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အသက်ရှူရန် အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားရှိနေသည့် COVID-19 လူနာအနည်းငယ်သာ အသက်ရှူစက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု မှတ်ယူထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပုသိမ်ဆေးရုံ၏ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်ကပြောဆိုခဲ့သည်။ “ဒါပေမဲ့ မြန်မာမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားတာ ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းထားလို့မရဘူး၊ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရမှာပဲ” ဟု သူကပြောသည်။
မေလအကုန်ပိုင်းတွင် စတင်မည့် မိုးရာသီကြောင့်လည်း စိုးရိမ်မိကြောင်း ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်ကပြောသည်။ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်တတ်သည့် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် COVID-19 ကူးစက်မှုပိုမိုမြန်ဆန်သွားနိုင်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်ကြီးအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံရှိ သီးခြားစောင့်ကြည့်ဆောင်တွင်တာဝန်ကျသည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးက ဆေးရုံ၌ အသက်ရှူစက်တစ်ခုသာရှိနေပြီး ယင်းကို အဆောင်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ဝန်ကြီးဌာနက ဆေးရုံတွေကို နောက်ထပ်အသက်ရှူစက်တွေ ဘာလို့မထုတ်ပေးသေးတာလဲ၊ ငွေမရှိလို့လား၊ လူနာတွေ အသက်ရှူကျပ်ပြီဆိုရင် အသက်ရှူစက်ဟာ မရှိမဖြစ်ပဲ” ဟု သူကပြောဆိုခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနသည် ဆေးရုံများသို့ လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီး အဆိုပါထောက်ပံ့မှုစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် COVID-19 ကိုရှေ့တန်းမှကာကွယ်နေသောဆရာဝန်၊သူနာပြုနှင့်ပရဟိတအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကို ရုပ်သံမှ မေးမြန်းခန်းတွင် လိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး “အစိုးရက ဘာကူညီရမလဲ” ဟု လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
COVID-19 ကူးစက်ခံရသော်လည်း ရောဂါမပြင်းထန်သူများကို ကုသပေးရန်အတွက်မူ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း Frontier က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် အခြားဆေးရုံများမှ ဝန်ထမ်းများကပြောဆိုခဲ့သည်။ လာမည့်ရက်များနှင့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူဦးရေတိုးပွားလာမည်ဟု ယုံကြည်ထားပြ